Ukumanyana emthandazweni Discover Discover Discover online ▷ ➡️
Yonke imihla, uluntu luba namava anzima kakhulu kwaye antsonkothileyo asikhumbuza ubawo wethu, ke bemanyene emthandazweni Lithuba elihle lokwenza imithandazo emincinci yemihla ngemihla esisinika ukomelela kunye noxolo lwengqondo, nokuba sithini na.
Imithandazo imanyanisa abazalwana abaninzi
1 Ukumanyana emthandazweni: Zimele ntoni umntu?
2 Ukumanyana emthandazweni wokuphiliswa kwelungu losapho
3 Ukumanyana emthandazweni wokukhuselwa kwabantu
4 Ukumanyana emthandazweni ngezihlandlo ezikhethekileyo
5 Ukumanyana emthandazweni emini nasebusuku
Ukumanyana emthandazweni: Zimele ntoni umntu?
Imithandazo ibonisa kwiinkolo ezahlukeneyo okanye iinkolelo zomntu, isenzo esivela kuThixo apho kucelwa khona okanye kunxulunyaniswa nomntu ongcwele okanye ongcwele, apho umntu anokholo khona. Esi sicelo okanye unxibelelwano lunokwenziwa ngengqondo okanye ngegama likaThixo ngelixa uphinda umthandazo okanye ufunda.
NgesiLatin, imithandazo ithetha "ukucaphula nokuphinda isicelo ngomlomo", yiyo loo nto kwinkolo nganye benikezela uthotho lokufundwa ukuthumela ingcinga, umbulelo okanye isicelo kuThixo.
Uphawu olubaluleke kakhulu kwimithandazo kukuba lunokuphindaphindwa kwiilwimi ezahlukeneyo, isiGrike, iSanskrit, isiArabhu, isiHebhere okanye naluphi na ulwimi lwelizwe ngalinye, kodwa konke oko ngenjongo yokuqinisekisa nokunikezela ngoxolo lwasemoyeni ngamaxesha anzima. njengokugula, ukhuseleko, usapho, iqabane, ngeentsuku ezikhethekileyo okanye ukuqala okanye ukuphela kosuku.
Ukumanyana emthandazweni wokuphiliswa kwelungu losapho
Tata omkhulu, ndiyakuthethelela phambi kwakho, ukuba ubuze impilo kum (umyeni, unyana, utata, umama okanye isalamane) kuba esi sifo sinzima sikwazile ukufunxa onke amandla akhe kwaye sifuna ukuba uphinde uchache. Ndiyazi ukuba ungenza yonke into, ubugubungele ubomi bakhe ngengubo yakho engcwele ngelixa unika amandla kunye nemvisiswano emzimbeni wakhe nasemoyeni, kuba olwakho luzuko lwanaphakade.
Thixo othandekayo, wena ungenza yonke into kwaye uyayibona, mamela yonke imithandazo nezicelo zabantu abahlangana phambi kwakho ukubeka ezandleni zam (umyeni, unyana, utata, umama, umama okanye isalamane) omaziyo nosithandayo. nawe. Nika isiqabu kuko konke ukungahambi kakuhle kwakho kwaye singamanyana kwakhona ukukudumisa.
Enkosi Bawo Osenyangweni, ngokumamela izicelo zam. Lo mzuzu unzima ukwazile ukugxininisa ngakumbi uthando lwam kuwe, ke isigqibo sakho ngam (umyeni, unyana, utata, umama, isihlobo okanye isihlobo) siya kundenza ndikubone ukubaluleka kwakho kunye nobukhulu ebomini bam.
Isandla sakho sokuphilisa sikhathalele ikamva lam (umyeni, unyana, utata, umama okanye isalamane) Bawo oyiNgcwele, ndincede ndingawi lithemba, undikhokele kwaye undikhaphe kule ndlela. Amen.
Ukumanyana emthandazweni wokukhuselwa kwabantu
Enkosi ngabantu abakwazileyo ukusinda kule ngozi (ingozi, ingxaki, ingqumbo yendalo okanye imeko) kuba bekwazile ukusinda ngokwemvelo kunye nokhuseleko lwakho. Ndiyabulela kuwe kuba ubomi babo, njengabo bonke abantwana bakho, bayisampula yokholo nothando olumsulwa, oluye lwavumela umanyano ngale mizuzu.
Bawo oNgcwele, ndikunika lo mthandazo ulandelayo ukukunika intsikelelo nganye oyibeke endleleni yam nakusapho lwam, ndiyabulela ngexesha ngalinye ebeliphila lizele luvuyo nosizi. Enkosi kuwe, ngokubeka umntu ngamnye endleleni yam, kwabo bahlala ngamaxesha anzima nakwabo ndibagcina entliziyweni yam.
Tata Othandekayo, wena obona yonke into kwaye wazi yonke into, mamela le ndodana ithobekileyo ikhalela ukukhuselwa kwakho. Ndiyabulela kuwe tata, ngesigqibo ngasinye nesicwangciso sobomi obumangalisayo, usikelele umzimba wam nomphefumlo kwaye ngaloo ndlela uzuze ubomi obungunaphakade.
Somandla Bawo, wena uyandazi kwaye wazi ukuba umphefumlo wam, iimvakalelo, amaphupha kunye neminqweno yam injani, ndinike ithuba lokujongana nale meko kwaye ndigubungele ilungu ngalinye losapho ngengubo yakho kunye negazi elisikelelweyo.
Thandaza nini nalapho ufuna khona
Ukumanyana emthandazweni ngezihlandlo ezikhethekileyo
Bawo omhle nosikelelweyo, enkosi ngesipho ngasinye osibeka etafileni namhlanje, ngempilo yosapho ngalunye kunye nabahlobo kwaye ngaphezu kwako konke, enkosi ngokusijoyina kwakhona kwesi sidlo.
Enkosi bawo ngokusivumela ukuba sihlangane kule tafile kwaye sikwazi ukukhumbula ukuzalwa konyana wakho uYesu, ngelixesha sidumisa ubukho bakho, ngokuzithoba sikelela iziqhamo ngomzamo esiwabelana ngawo namhlanje.
Kule mibhiyozo Bawo uSomandla, sinike uxolo, uvuyo nolonwabo. Sikelela ngothando lwakho olungunaphakade omnye nomnye wabantu abahleli kule tafile namhlanje, sibonise ubukho bakho kwaye uvule iintliziyo zethu ukuze uqhubeke uhlala kwintliziyo nganye yethu.
UThixo omangalisayo notata onemfesane, khanyisa itafile yakho ngeenkwenkwezi zakho ezinenceba, wandise kwaye usikelele ukutya kwethu. Siphe uthando lwakho, ububele, uthando, ithemba kunye nentabalala egameni lomntwana wakho, Amen.
Utata omhle, ngalo mhla ubaluleke kakhulu wokuzalwa konyana wakho uYesu, intliziyo yam nomphefumlo wam ugcwele luvuyo kunye nemvakalelo yokwazi ukuba kungekudala uza kuzalwa ngaphakathi kweentliziyo zethu. Eli xesha lelomanyano, uthando kunye neentsikelelo endiphakamisela kuzo lo mthandazo uthobekileyo kuwe.
Ukumanyana emthandazweni emini nasebusuku
Ndiyabulela ngokundinika olunye usuku ndizele yimpilo kunye neentsikelelo emsebenzini wam nolwalamano, yonke imihla undibonisa ukuba unguBawo kunye nentsikelelo yam enkulu.
Ndizukile onke amandla, ndaphinda ndavula amehlo am, ndiphakamisa iingalo zam ndinyusa iinyawo zam kuba undinike usuku olutsha oluzele ziintsikelelo nabantu abamangalisayo. Ndiyabulela kuba ndikwazi ukubeka ubomi bam kunye nendlela yam ezandleni zakho, kuba uliziko lam kunye nomnini wobomi bam.
Kwakhona ubusuku buyafika kwaye ndifuna ukubulela kuwe, Bawo Thixo, ngokufikelela kuwe kwakhona, ngokuvumela ngalinye lamalungu osapho lwam ukuba abe nam ngobu busuku. Sikhusele, usisikelele kwaye usinike impilo yonke imihla Bawo Onenceba.
Siyakumema ukuba uqhubeke uthandaza kwaye uqinise ukholo lwakho, ngokusebenzisa inqaku lethu IRosari kwiintliziyo ezingcwele zikaYesu kunye neminye imithandazo.
Umthandazo mna moni
Ukuthandazela umntu oswelekileyo